ရန်ကုန်မှာ တက္ကစီယာဉ်​​မောင်း လည်​ပင်းအား၊ ဓားဖြင့်​လှီး၍ ကားလု - MM Live News
တက္ကစီယာဉ်​​မောင်း လည်​ပင်းအား၊ ဓားဖြင့်​လှီး၍ ကားလုယူ​မောင်း​ပြေးမှုဖြစ်​ပွား
​အောက်​တိုဘာ(၁၆)ရက်​​နေ့ည(၁၁)နာရီ(၄၅)မိနစ်​ခန့်​က၊ရန်​ကုန်​တိုင်း၊​ကျောက်​တန်းမြို့နယ်​၊​ကျောက်​တန်းမြို့ နှင့်​တံတားမြို့သို့ဆက်​သွယ်​ထား​သော၊ကားလမ်းမကြီး၊ပီလခတ်​​ဘုရား​​ကျောင်းအနီးတွင်​၊ တက္ကစီအငှားယာဉ်​(၁)စီးအား ငှားရမ်းစီးနှင်းလာသူမှ ယာဉ်​​မောင်းအား၊ လည်​ပင်းဓားဖြင့်​လှီး၍၊ကားလုယူမှုဖြစ်​ပွားခဲ့သည်​။
အခင်းဖြစ်​​နေရာသို့၊​ကျောက်​တန်းမြို့နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့ မှူးရဲမှူး​အောင်​မျိုးလတ်​၊ဦးစီး၍သွား​​ရောက်​စစ်​​ဆေးခဲ့ရာ၊ လည်​ပင်းဓားဖြင့်​အလှီးခံရသည့်​ ယာဉ်​​မောင်းမှာ၊​ဇော်​မိုး​အောင်​(၄၀)နှစ်​ (ဘ)ဦး​ငွေသိန်း၊အမှတ်​(၁၅၀) ဌ /တိုးချဲ့ရပ်​ကွက်​၊​ မြောက်​ဥက္ကလာပမြို့နယ်​၊​ နေသူဖြစ်​ ပြီး၊ ၎င်းတွင်​ ဝဲဘက်​လည်​ပင်း၌၊(၄)လက်​မခန့်​ပြတ်​ရှဒဏ်​ရာ (၁)ချက်​ရရှိခဲ့သဖြင့်​၊ မြို့နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့မှူးရဲမှူး​အောင်​မျိုးလတ်​မှ၎င်း ရဲကားဖြင့်​၊လူနာအားတင်​​ဆောင်​၍၊​ကျောက်​တန်းမြို့ ပြည်​သူ့​ဆေး ရုံသို့ပို့​ဆောင်​ခဲ့ရာ၊ထိုမှတစ်​ဆင့်​၊ရန်​ကုန်​ပြည်​သူ​​ဆေးရုံသို့လွဲ​ပြောင်းကုသ​စေရာ၊မြို့မရဲစခန်းမှတာဝန်​မှူးဒုရဲအုပ်​ရဲမင်းထက်​နှင့်​တပ်​သား​အောင်​မျိုးထက်​တို့မှလိုက်​ပါပို့​ဆောင်​​ပေးခဲ့သည်​။
အဆိုပါယာဉ်​​မောင်း၏​ပြောပြမှုအရ၊ ၎င်းသည်​ ည(၁၀)နာရီခွဲအချိန်​က၊ FF/5210 ၊Fielder. (ခဲ​ရောင်​) တက္ကစီယာဉ်​အား​မောင်းနှင်​လာရာ၊သာ​ကေတမြို့နယ်​၊ရှုခင်းသာလမ်း၊M.O.G.E၊ ရုံး​ရှေ့အ​ရောက်​တွင်​၊အင်္ကျီခဲ​ရောင်​ လက်​ပြတ်​/ပုဆိုးဝတ်​ဆင်​လျက်​၊​ကျောပိုးအိတ်​(၁)အိတ်​ပါရှိသူ အသားမဲကုလား၊ပုံစံလူတစ်​​ယောက်​မှ​​ ကျောက်​တန်းမြို့နယ်​၊ ပီလခတ်​ဘုရား​ကျောင်းအနီးသို့၊ အသွား/အပြန်​(၂၃၀၀၀/)ကျပ်​ဖြင့်​၊ငါးရမ်း၍လိုက်​ပါခဲ့ရာ၊ အခင်းဖြစ်​​နေရာအ​ရောက်​တွင်​၊ ကားအားရပ်​ခိုင်း ၍ ၊ရပ်​​ပေးခဲ့စဉ်​၊ယာဉ်​ငှားလာသူမှအသင့်​ပါလာ​သောဓားဖြင့်​၊ လည်​ပင်းအား​လှီးခဲ့ရာ ယာဉ်​​မောင်းမှကားလမ်း​ဘေး​ပြေးဆင်းသွားစဉ်​၊ ကားငှားရမ်းစီးနှင်းလာသူမှယာဉ်​​အား ​မောင်းနှင်​ထွက်​​ပြေးသွားခဲ့​သော​ကြောင့်​၊ ပတ်​ဝန်​ကျင်​အား အကူညီ​တောင်းခံခဲ့ရာ၊ ပီလခတ်​မှဦး​စောမူးတို့အဖွဲ​ရောက်​ရှိလာပြီး၊​ ​ကျောက်​တန်းမြို့မ ရဲ စခန်းသို့ အ​ကြောင်းကြားခဲ့​ကြောင်းဖြစ်​သည်​။
ယာဉ်​အားလုယူသူတရားခံအား၊​ကျောက်​တန်းမြို့မရဲစခန်းမှ(ပ)၄၀၅/၂၀၁၈၊ပုဒ်​မ-၃၉၂၊အရအမှုဖွင့်​​ဆောင်​ရွက်​လျက်​ရှိပြီး၊ ယာဉ်​နှင့်​လုယူသူတရားခံအား၊ဖမ်းဆီးရမိ​ရေးအတွက်​၊​တောင်​ပိုင်းခရိုင်​ရဲတပ်​ဖွဲ့မှူးဒုတိယရဲမှူးကြီး ထွန်း​ဖေမှအနီးကပ်​စီစဉ်​ညွှန်​ကြားလျက်​ရှိရာ၊​ အောက်​တိုဘာ (၁၇)ရက်​​နေ့နံနက်​(၆)နာရီခွဲအချိန်​ခန့်​တွင်​၊ လုယူသွား​သောကားအား၊အခင်းဖြစ်​​နေရာ၏ အ​ရှေ့ ဘက်​(၄)ဖာလုံ​ကျော်​ခန့်​အကွာ၊ ကားလမ်းမကြီး၏​မြောက်​ဘက်​​ရေ​မြောင်း ထဲထိုးကျလျက်​​တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊တရားခံမှာ ထွက်​​ပြေးလွတ်​​မြောက်​လျက်​ရှိရာ၊ဖမ်းဆီးရမိနိုင်​​ရေး ​ဆောင်​ရွက်​လျက်​ရှိ​ကြောင်းသိရသည်​။
တက်ကစီယာဉျ​​မောငျး လညျ​ပငျးအား၊ ဓားဖွငျ့​လှီး၍ ကားလုယူ​မောငျး​ပွေးမှုဖွဈ​ပှား
​အောကျ​တိုဘာ(၁၆)ရကျ​​နညေ့(၁၁)နာရီ(၄၅)မိနဈ​ခနျ့​က၊ရနျ​ကုနျ​တိုငျး၊​ကြောကျ​တနျးမွို့နယျ​၊​ကြောကျ​တနျးမွို့ နှငျ့​တံတားမွို့သို့ဆကျ​သှယျ​ထား​သော၊ကားလမျးမကွီး၊ပီလခတျ​​ဘုရား​​ကြောငျးအနီးတှငျ​၊ တက်ကစီအငှားယာဉျ​(၁)စီးအား ငှားရမျးစီးနှငျးလာသူမှ ယာဉျ​​မောငျးအား၊ လညျ​ပငျးဓားဖွငျ့​လှီး၍၊ကားလုယူမှုဖွဈ​ပှားခဲ့သညျ​။
အခငျးဖွဈ​​နရောသို့၊​ကြောကျ​တနျးမွို့နယျ​ရဲတပျ​ဖှဲ့ မှူးရဲမှူး​အောငျ​မြိုးလတျ​၊ဦးစီး၍သှား​​ရောကျ​စဈ​​ဆေးခဲ့ရာ၊ လညျ​ပငျးဓားဖွငျ့​အလှီးခံရသညျ့​ ယာဉျ​​မောငျးမှာ၊​ဇျော​မိုး​အောငျ​(၄၀)နှဈ​ (ဘ)ဦး​ငှသေိနျး၊အမှတျ​(၁၅၀) ဌ /တိုးခြဲ့ရပျ​ကှကျ​၊​ မွောကျ​ဥက်ကလာပမွို့နယျ​၊​ နသေူဖွဈ​ ပွီး၊ ၎င်းငျးတှငျ​ ဝဲဘကျ​လညျ​ပငျး၌၊(၄)လကျ​မခနျ့​ပွတျ​ရှဒဏျ​ရာ (၁)ခကျြ​ရရှိခဲ့သဖွငျ့​၊ မွို့နယျ​ရဲတပျ​ဖှဲ့မှူးရဲမှူး​အောငျ​မြိုးလတျ​မှ၎င်းငျး ရဲကားဖွငျ့​၊လူနာအားတငျ​​ဆောငျ​၍၊​ကြောကျ​တနျးမွို့ ပွညျ​သူ့​ဆေး ရုံသို့ပို့​ဆောငျ​ခဲ့ရာ၊ထိုမှတဈ​ဆငျ့​၊ရနျ​ကုနျ​ပွညျ​သူ​​ဆေးရုံသို့လှဲ​ပွောငျးကုသ​စရော၊မွို့မရဲစခနျးမှတာဝနျ​မှူးဒုရဲအုပျ​ရဲမငျးထကျ​နှငျ့​တပျ​သား​အောငျ​မြိုးထကျ​တို့မှလိုကျ​ပါပို့​ဆောငျ​​ပေးခဲ့သညျ​။
အဆိုပါယာဉျ​​မောငျး၏​ပွောပွမှုအရ၊ ၎င်းငျးသညျ​ ည(၁၀)နာရီခှဲအခြိနျ​က၊ FF/5210 ၊Fielder. (ခဲ​ရောငျ​) တက်ကစီယာဉျ​အား​မောငျးနှငျ​လာရာ၊သာ​ကတေမွို့နယျ​၊ရှုခငျးသာလမျး၊M.O.G.E၊ ရုံး​ရှအေ့​ရောကျ​တှငျ​၊အကငြ်ျီခဲ​ရောငျ​ လကျ​ပွတျ​/ပုဆိုးဝတျ​ဆငျ​လကျြ​၊​ကြောပိုးအိတျ​(၁)အိတျ​ပါရှိသူ အသားမဲကုလား၊ပုံစံလူတဈ​​ယောကျ​မှ​​ ကြောကျ​တနျးမွို့နယျ​၊ ပီလခတျ​ဘုရား​ကြောငျးအနီးသို့၊ အသှား/အပွနျ​(၂၃၀၀၀/)ကပျြ​ဖွငျ့​၊ငါးရမျး၍လိုကျ​ပါခဲ့ရာ၊ အခငျးဖွဈ​​နရောအ​ရောကျ​တှငျ​၊ ကားအားရပျ​ခိုငျး ၍ ၊ရပျ​​ပေးခဲ့စဉျ​၊ယာဉျ​ငှားလာသူမှအသငျ့​ပါလာ​သောဓားဖွငျ့​၊ လညျ​ပငျးအား​လှီးခဲ့ရာ ယာဉျ​​မောငျးမှကားလမျး​ဘေး​ပွေးဆငျးသှားစဉျ​၊ ကားငှားရမျးစီးနှငျးလာသူမှယာဉျ​​အား ​မောငျးနှငျ​ထှကျ​​ပွေးသှားခဲ့​သော​ကွောငျ့​၊ ပတျ​ဝနျ​ကငျြ​အား အကူညီ​တောငျးခံခဲ့ရာ၊ ပီလခတျ​မှဦး​စောမူးတို့အဖှဲ​ရောကျ​ရှိလာပွီး၊​ ​ကြောကျ​တနျးမွို့မ ရဲ စခနျးသို့ အ​ကွောငျးကွားခဲ့​ကွောငျးဖွဈ​သညျ​။
ယာဉျ​အားလုယူသူတရားခံအား၊​ကြောကျ​တနျးမွို့မရဲစခနျးမှ(ပ)၄၀၅/၂၀၁၈၊ပုဒျ​မ-၃၉၂၊အရအမှုဖှငျ့​​ဆောငျ​ရှကျ​လကျြ​ရှိပွီး၊ ယာဉျ​နှငျ့​လုယူသူတရားခံအား၊ဖမျးဆီးရမိ​ရေးအတှကျ​၊​တောငျ​ပိုငျးခရိုငျ​ရဲတပျ​ဖှဲ့မှူးဒုတိယရဲမှူးကွီး ထှနျး​ဖမှေအနီးကပျ​စီစဉျ​ညှနျ​ကွားလကျြ​ရှိရာ၊​ အောကျ​တိုဘာ (၁၇)ရကျ​​နနေံ့နကျ​(၆)နာရီခှဲအခြိနျ​ခနျ့​တှငျ​၊ လုယူသှား​သောကားအား၊အခငျးဖွဈ​​နရော၏ အ​ရှေ့ ဘကျ​(၄)ဖာလုံ​ကြျော​ခနျ့​အကှာ၊ ကားလမျးမကွီး၏​မွောကျ​ဘကျ​​ရေ​မွောငျး ထဲထိုးကလြကျြ​​တှရှေိ့ခဲ့ရပွီး၊တရားခံမှာ ထှကျ​​ပွေးလှတျ​​မွောကျ​လကျြ​ရှိရာ၊ဖမျးဆီးရမိနိုငျ​​ရေး ​ဆောငျ​ရှကျ​လကျြ​ရှိ​ကွောငျးသိရသညျ​။
အောင်လအန်ဆန် နှင့် မဒ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မည့် ပြိုင်ဘက်ကိုကြေညာ
September 11, 2018 MM Live News